Xaqiiqo Muujineysa In Kylian Mbappe Uu Ka Wanaagsan Yahay Lionel Messi Iyo Cristiano Ronaldo Oo Lasoo Bandhigay. - Wargane News
Home Sports Xaqiiqo Muujineysa In Kylian Mbappe Uu Ka Wanaagsan Yahay Lionel Messi Iyo...
Kylian Mbappe waa da’yarka ugu shidan qaaradda yurub waqigaan, marka la eego tayada uu kusoo bandhigay Champions League isagoo jira 18-sano, balse sidee loola barbardhigi karaa Lionel Messi iyo Cristiano Ronaldo marka ay da’daan ahaayeen?
Weeraryahanka da’da yar ee reer France wuxuu dhaliyay 5-gool tartanka Champions League isagoo jira 18-sano iyo 120-maalmood.
Mbappe wuxuu noqday ciyaariyahankii ugu horeeyay ee gool dhaliya afartiisa kulan ee ugu horeeya wareegyada bug-baxda Champions League – kadib goolashii uu ka dhaliyay Manchester City Iyo As Monaco.
Sidee loola barardhigaa Mbappe xidigaha Ronaldo Iyo Messi?
Marka uu Lionel Messi gaaray 18-sano iyo 120-maalmood waxey ku beegneed October 22, 2005, wuxuuna kasoo muuqday Champions League afar kulan oo qura, si kastaba kulamadaas kuma guuleysan inuu xitaa hal gool dhaliyo, ma uusan sugin goolkiisii ugu horeeyay markaas oo uu November 2 isla sanadkaas gool ka dhaliyay Panathinaikos.
Ronaldo ayaa gaaray da’daas June 5, 2003, balse uma laheen wax qibrad ah koobka Champions League sida Messi iyo Mbappe da’dooda 18-jirka, kaliya hal kulan oo badal ah ayaa loo diiwaan galiyay iyo sidoo kale laba kulan oo UEFA Cup ah.;
CR7 waxey ku qaadatay waqti dheer inuu helo gool, afar sano ayeyna ku qaadatay wuxuuna goolkiisii ugu horeeyay ka dhaliyay AS Roma kulan ay 7-1 kooxdiisa ku awood sheegatay.